Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017: Mong Palatino · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017: Mong Palatino
Voadika ny 12 Marsa 2017 4:29 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English
Sary nalaina tamin'ny Vovonan'ny Global Voices tao an-tanànan'i Cebu, Filipina.
Ry namana sy mpiara-miasa, Mabuhay! Sady faly aho no heni-boninahitra voatendry hofidiana solontenan'ny tonia ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Global Voices.
Efa nandray anjara tamin'ny fifidianana maro aho taloha saingy ny fifidianana filankevi-pitantanana GV angamba no tena miavaka satria tsy misy ny resy. Mpikambana mana-danja ato amin'ny fikambanana avokoa ireo hafa rehetra voatendry ary manome vina na fandaharan'asa lehibe momba ny hoavin'ny GV ny tsirairay amin'izy ireo.
Tamin'ny herintaona, nankalaza ny fahafolo taonako amin'ny maha mpikambana ahy ato amin'ny GV aho. Ny zavatra nosoratako tamin'izany fotoana izany dia mbola maneho ny fihetseham-poko ankehitriny. Afa-mirehareha aho fa nilatsaka an-tsitrapo ho an'ny GV ary mbola vonona hatrany hampiroborobo ny fomba fijery mendri-kaja sy ny andraikitry ny fiarahamonintsika virtoaly tsimanampaharoa.
Mpikatroka monina ao Manila, Filipina aho. Efa tonian-dahatsoratra Azia Atsimo Atsinanana tato amin'ny GV hatramin'ny taona 2008. Ary mpandray anjara mavitrika ao amin'ny GV Advocacy. Efa nandray anjara aho tamin'ny Vovonan'ny GV tao New Delhi tamin'ny taona 2006, Nairobi tamin'ny taona 2012, ary Cebu tamin'ny taona 2015.
Mihevitra ny tenako ho mpikambana ela nihetezana ato amin'ny GV aho saingy koa mahatsapa fa tsy adinoko mihitsy ny hafanam-pon'ny olom-baovao. Misy hatrany ny zava-baovao sy mahaliana hita momba ny GV, na izany mikasika ny mombamomba ireo mpirotsaka an-tsitrapo, ny tantara manome aingam-panahy avoakan'ny fikambanana, na ny fitombon'ny zavatra ataontsika mba hanatsarana ny fahalalantsika momba an'izao tontolo izao.
Manantena hitondra ity vinavinan'ny ela nihetezana tato amin'ny GV ity sy ny hafanampon'olombaovao ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny GV aho.
Sary nalaina nandritra ny Vovonan'ny Global Voices tao New Delhi, India
Tamin'ny vanim-potoana izay iantsoan'ireo mpaneho hevitra mahazatra ny “faikam-baovao”, “zava-misy hafa”, “marina taty aoriana” sy ny famaritana raitra hafa mikasika ny zavatra malaza mampikorontana ankehitriny eo amin'ny tontolon'ny haino aman-jery, dia fanefitra famelombelomana kosa ny asan'ny GV izay manome hery avy hatrany ho an'ny mpamaky mba hahatakatra ny zava-misy henjana ankehitriny.
Ao anatin'ny fahafahana mihazona ny lovany antserasera ampolo taonany maro ny GV ary manolotra ny asany ho safidy azo iainana sy ilaina hiadiana amin'ny hafainganan’ ny fiharatsian’ ny kalitaon'ny fifanakalozam-baovao eo amin'ny sehatra haino aman-jery rehetra.
Ny tiako amin'ny GV dia vonona hatrany izy hanatsara ny fomba fanatanterahany ny adidiny. Ny filankevi-pitantanan'ny GV no manamory ny familiana saingy amin'ny ankapobeny, ny fiarahamonina no mitarika ny asa andavanandro. Zava-dehibe anefa ny fanatsarana ny rafitra domberina-fanamarihana (feedback), fanamby mitohy hatrany ny fandrisihana ny mpikambana tsirairay ato amin'ny fikambanana, ary ny mampanankery ny tena fiantraikan'ny GV antserasera sy ivelan'ny aterineto no manandratra ny mahazava-dehibe ny asantsika.
Tsy misy ny raikipohy tsotra amin'ny fanatrarana ireo tanjon'ny fikambanana saingy manana andraikitra manokana ny solontenan'ny tonia ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny GV amin'ny fanomezana fahafahana amin'ny fifaneraseran'ny vondrona sy ny fampaherezana ireo mpanoratra mirotsaka an-tsitrapo sy ireo tonia havitrika kokoa amin'ny fanehoana ny fomba fijerin'izy ireo.
Tokony hanohy izay vitan'ireo solontenantsika ao amin'ny filankevi-pitantanana isika satria matoky aho fa mahatonga ny GV ho mangarahara kokoa ny fisantarana andraikitr'izy ireo mendri-piderana. Ny azoko atolotra dia ny traikefako am-polo taona tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny GV sy ny toe-tsain'ny mpilatsaka an-tsitrapo vaovao iray izay te-hitrandraka ny fahafaha-manatratra araka izay betsaka indrindra ny fomba fijery sy ny andraikitry ny GV manana fiantraikany tsara kokoa amin'ny alalan'ny fanao misy ankehitriny.
Aza misalasala mifandray amiko amin'ny alalan'ny mailaka: mongpalatino@gmail.com na Twitter: @mongster.
Manao fampielezan-kevitra ho an'i Kevin Rennie ho solontenan'ny mpilatsaka an-tsitrapo ihany koa aho. Mpikambana ela nihetezana tao amin'ny fiarahamonina GV izy, mpilalao miavaka amin'ny ekipa, ary namako matsilo saina.
Mpikambana ao amin'ny ekipa Azia Atsimo Atsinanana Global Voices nandritra ny Vovonana 2015 tao Cebu.
Ny Blaogim-Piarahamonina Global Voices dia sehatra ho an-ny mpikambana ato aminay hifampizarana ala hamohamo, tantara manokana. Natao ihany koa hieritreretana ny asa iarahana, hifampizarana hevitra sy fijery amin'ny sehatra misy anay. · Lahatsoratra rehetra
Tantaran'ny Fifidianana farany
3 andro izayEoropa Afovoany & Atsinanana
Nihabetsaka ny fanentanana hametaka ny mpanao gazety sy ny fampitam-baovao rosiana ho ‘kasinga vahiny’ taorian'ny fifidianana
6 andro izayAfrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Nasaina namotsotra ireo gadra 21 nanohitra ny lalànam-pifidianana “manavakavaka” i Qatar
18 Septambra 2021Angola
Voamariky ny fanovana lalampanorenana sy ny tsy fitokisana ny filazana fifidianana ao Angola
25 Aogositra 2021Amerika Latina
12 Avrily 2021Azia Atsinanana
Manangan-drantsan-tànana telo ireo artista ho fanohanana ireo mpanao fihetsiketsehana ao Myanmar